भ्यालेन्टाइन सप्ताहका लालजोडी - Sindhuli Saugat
– रवि मिश्र २०७४ माघ २७ गते शनिवार काठमाडौं
कामरेड ओलीले गुलावको फूल किन्नुभो । एकफेर सुँघ्नुभो र भन्नुभो, “हन के फूल राख्या यो ? सुँघ्दै पसिना गनाउने । अलि हरर बास्नेदार छैन ? परफिम् जस्तो । अगरबत्ती जस्तो । चमेली बास्ना छुटाउने खालको ।”
साउजीले भन्नुभो, “यो स्पेसल बास्ना हो कामरेड । महान कामरेडलाई दिने खालको भन्नुभो, त्यसैले त्यस्तै खालको मगाएको हजुर । किसानको बारीबाट । सर्वहाराका नेतालाई पसिनाको बास्ना मन पर्छ भनेर । भएन र ?”
“तोइट !” ओलीजीले भन्नुभो, “यस्तो नि बास्ना हुन्च ? यस्ले त रिंगाटा छुटाउँछ । नाथ्री फुटाउँछ । पार्टी एकता भाँड्छ । यस्तो माक:फुइँ गन्धको नि फूल राख्ने हो ? फूल त देख्दा मार्क्सवादको फ्लेवर आओस् । सुँघ्दा सत्ता लेभलको परम् आनन्द मिलोस् । कुर्सीमै बसेजस्तो । फननन घुमेको जस्तो । रोमाञ्चक । आहा !”
“त्यस्तो फ्लेवरको फूल त छैन कामरेड,” साउजीले भन्नुभो, “हुन्च भनेर सुनेको पनि आजै हो ।”
ओलीजीले भन्नुभो, “हैन, तपाईंले गैंडै देख्नुभा छैन कि के हो ? गैंडा देखेको मान्छेले त यसो भन्न नपर्ने हो । देखेको छैन भने एकपटक सौराह जानुस् । गैंडा हेर्नुस् । जाने फुर्सद छैन भने सयको नोटमा हुन्च । त्यै हेर्नुस् । खैर केही छैन । अहिलेलाई यसमा अत्तर छरेर अलि उत्ताउलो बास्नेदार बनाम् । अत्तर चैं हत्तपत्त नउड्ने खालको है ।”
“ढ्वाक ढ्वाक ढ्वाक !”
कामरेड प्रचण्डले ढोका खोल्नु भो र भन्नुभो, “ओली कामरेड पो ?”
“अनि देउवाजी हुनु पऱ्यो त ?” ओलीजीले भन्नुभो, “हेप्पी भेलेन्टाइन सप्ताह कमरेड ! आज रोज डे रे । गुलाव दिन आ’को ।”
प्रचण्डजी एक हल हाँस्नुभो र भन्नुभो, “माझीलाई माछाको कोसेली ! हँसाम्नु हुन्च तपाईं । जसको नामै पुष्प छ, उसैलाई गुलाव पुष्प उपहार ? पुष्पकमललाई पुष्पगुलाव । हिहिहि…. ! नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको बेलामा निश्चित रुपमा नयाँ ढङ्गको पो उपहार दिनुपर्छ त !”
“अनि रोज डे छ, के हुक्का दिनु त नयाँ ढङ्गको भन्दै ?” कामरेड ओलीले भन्नुभो, “हुक्का त हुक्का डेमै दिम्ला । आज रोज डे । गुलावै लिनुस् । बरु सुगन्ध उड्ला । छिटो समाउनुस् ।”
कामरेड प्रचण्डले भन्नुभो, “रोज डे भए रोज होइन, रोजेको दिनुस् । म नि तपाईंलाई रोजेको दिन्छु ।”
कामरेड ओलीले सोध्नुभो, “के रोज्नुहुन्छ ?”
प्रचण्डजीले भन्नुभो, “प्रधानमन्त्री ठूलो दलले खानुपर्छ । म अध्यक्ष रोज्छु । त्यै दिनुस् । तपाईं के रोज्नुहुन्छ ?”
ओलीजीले भन्नुभो, “म त दुबै रोज्छु । अध्यक्ष पनि, प्रधानमन्त्री पनि । दुबै दिनुस् ।”
प्रचण्डजीले सोध्नुभो, “दुबै तपाईंलाई दिएर मलाई चैं के नि ?”
“तपाईं यही गुलाव लिनुस् । काइताको छ, “ओलीजीले भन्नुभो, “मैले ठ्याक्कै दुई घण्टा लगाएर छानेको । सुन्दर, सुगन्धी !”
“तपाईंको फूल तपाईं नै राख्नुस्,” प्रचण्डजी कड्किनुभो, “यसरी नि पार्टी एकता हुन्च ?”
“त्यसो भए यसो गरम्,” ओलीजीले भन्नुभो, “प्रधानमन्त्री त मलाई भैगो । अध्यक्षको लागि एउटो सिक्का माथि हुऱ्याम । गाई कि त्रिशूल गरौं । गाई परे नि मलाई । त्रिशूल परे नि मलाई ।”
प्रचण्डजीले सोध्नुभो, “अनि ठाडो परे चैं मलाई ?”
ओलीजीले भन्नुभो, “हैन । त्यो जोखिम पनि नउठाम् । सिक्का खस्दा हिलो अथवा गोबरमा पऱ्यो भने गाडिएर ठाडै पनि रहन सक्छ । त्यसैले ठाडै परे नि मलाई नै ।”
प्रचण्डजीले सोध्नुभो, “अनि मलाई चैं ?”
ओलीजीले भन्नुभो, “हुऱ्याएको सिक्का खसेन । हावामै अडिरह्यो भने तपाईंलाई । हावामै गाई देखिएर अडिए नि तपाईंलाई । त्रिशूल देखेर अडिए नि तपाईंलाई । ठाडै अडिए नि तपाईंलाई । टस गरम् ?”
“तपाईंको टस मलाई टेस परेन हेर्नुस्,” प्रचण्डजीले भन्नुभो, “कहीँ नपाएर हावामा नि अडिन्छ सिक्का ? हावा कुरा !”
ओलीजीले भन्नुभो, “ईश्वरले तपाईं अध्यक्ष भएको देख्न चाहे भने अडिन्छ ।”
प्रचण्डजीले भन्नुभो, “ईश्वरको त तपाईंको जत्तिको नि विश्वास छैन । ती पोखरेलजीले त उहिल्यै भन्या- अध्यक्ष, प्रम सप्पै तपाईं (ओलीजी) नै हुनुपर्च भनेर ।”
“बरु यसो गरौं,” प्रचण्डजीले उपाय फुराउनुभो, “एउटो गुलेली ल्याम् !”
“किन ल्याउने गुलेली ?” ओलीजीले भन्नुभो, “स्पष्ट बहुमत आ’छ । सरकार बन्ने पक्का छ । अझै नि गुलेलीले सत्ता कब्जा गर्न पर्छ ?”
प्रचण्डले भन्नुभो, “गुलेली सत्ता कब्जा गर्न होइन ।”
ओलीजीले भन्नुभो, “क्यार्न त ?”
“टस गर्न ।”
“गुलेलीले नि टस हुन्छ ?”
“गरेसी हुन्च ।”
“गुलेलीमा सिक्का चढाउने । अनि पूरै तन्काउने,” प्रचण्डजीले बताउनुभो, “त्यसपछि बागमतीतिर टुइँक्याउने । पानीमै पुग्ने गरी ।”
ओलीजीले उत्सुक हुँदै सोध्नुभो, “अनि के हुन्च ?”
प्रचण्डजीले मुस्कुराउँदै भन्नुभो, “अनि सिक्का भेटिए तपाईं अध्यक्ष । नभेटिए म ।”
“तोइट !” ओलीजीले भन्नुभो, “गुलेलीले पार्टी कब्जा गर्न खोज्ने ?”
“आज त प्रपोज डे रच,” प्रचण्डजीले भन्नुभो, “हेप्पी प्रपोज डे कामरेड । पार्टी एकता गरौं । यही प्रस्ताव राखें ।”
“सेम टु यु कामरेड,” ओलीजीले भन्नुभो, “हुन्च । गरिहालौं । अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री दुबै मैलाई गरम् । अर्को प्रस्ताव राखें ।”
“धत् ! यस्तो नि प्रपोज हुन्च ?” प्रचण्डजीले भन्नुभो, “योभन्दा त देउवाजीको प्रस्ताव गतिलो थियो ।”
ओलीजीले अत्तालिँदै सोध्नुभो, “के भन्थे ?”
प्रचण्डजीले सुनाउनुभो, “प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भन्नुन्थ्यो । ल्याप्च्यै लाएर दिने रे पाँच वर्षलाई ।”
“मेरी आम्मै !” ओलीजीले भन्नुभो, “कान कुल्ला गरेर आउनुस् । बुद्धि बिग्रिन सक्छ यस्ता कुरा सुन्दा मात्रै पनि ।”
“हेप्पी चकलेट डे कामरेड !” ओलीजीले हातमा २५० ग्रामको क्याड्बरी थमाउँदै भन्नुभो, “लौ लिनुस्, आज चकलेट डे रच !”
“चक्लेट खान्नँ सुगर छ !” प्रचण्डजीले भन्नुभो, “अध्यक्ष दिनुस्, सुगरफ्री ।”
“प्रचण्डजी चियर्स !” देउवाजीले भन्नुभो ।
“आज टेडी बियर डे रच । मैले टुबोर्ग बियर पो ल्याएछु । आउनोस् दन्काम् । ज्योतिषले आज बियर खाए प्रधानमन्त्री बनिन्छ भन्याछन् !”
“यता आउनुस् यता,” प्रचण्डजी बोल्न नभ्याउँदै ओलीजीले तानेर पर लग्नुभो । सम्झाउनुभो, “रौसी, बियर खानु हुन्न कामरेड ! कलेजो झिरिप हुन्च ।”
“आउनोस् कामरेड ! आज हग डे रे । हामी हग गरौं ।”
कामरेडहरु अँगालोमा बाँधिनुभो ।
“हन कामरेड किन हाँस्नुभा ?” ओलीजीले सोध्नुभो ।
“कुर्सी सम्झेर काउकुती लाग्यो !” प्रचण्डजीले भन्नुभो ।
ओलीजीले भन्नुभो, “कुर्सी सम्झिनु हुन्न, मती भ्रष्ट हुन्च । मार्क्सवाद सम्झिनुस्, लेनिनवाद सम्झिनुस्, भण्डारीज्यूको जबज सम्झिनुस्, मेरो राष्ट्रवाद सम्झिनुस् । कुर्सी म सम्झिन्छु । तपाईं नसम्झिनुस् । कुर्सी सम्झ्यो भने चित्त शुद्ध हुन्न । चित्त सुद्ध नभई साम्यवादमा पुग्न सकिन्न ।”
“आज प्रमिस डे रे कामरेड !” प्रचण्डजीले भन्नुभो, “म पार्टी एकता गरी छाड्ने प्रमिस गर्दछु ।”
“म पनि पार्टी एकता गरी छाड्ने प्रमिस गर्दछु,” ओलीजीले थप्नुभो, “साथै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै नछाड्ने प्रमिस पनि गर्दछु ।”
प्रचण्डजीले नि अड्डी लिनुभो, “म पनि दुइटामध्धे एउटो कालले छोड्ला, नछोड्ने प्रमिस गर्दछु ।”
“आज किस डे रच,” ओलीजीले प्रमको कुर्सीलाई चुम्नुभो र भन्नुभो, “किस डे चुमेर मनाउनुपर्छ । अब पालो अध्यक्ष कुर्सीको ।”
“पख्नुस कामरेड !” प्रचण्डजीले रोक्नुभो, “तपाईं जुठो नहाल्नुस् । त्यो मेरो हो ।”
फेरि त्यही दिन अर्थात भ्यालेन्टाइन साङ्गेको अघिल्लो दिन महाशिवरात्रि परेछ । अब यो लालजोडी वामपन्थी सरकारको शिवबुटी फुइँक्याउँदै एकता आनन्द लिन्छन् कि पद बाँडफाँडको वैरागले एकतामोह भङ्ग भई चिम्टा, कमण्डलु बोकी बाबाजीको पछि लाग्छ्न्, जगको चासो यसैमा छ । कामरेडहरुको प्रणय दिवस नि यसैमा निर्भर छ । यस सुपरजोडीलाई हेप्पी भ्यालेन्टाइन डे !
(वास्तविक जीवनमा कतै नाम सुनेझैं लाग्ने पात्रहरु काल्पनिक हुन्)
पछिल्लाे - सिँचाई सचिव चढेको गाडी त्रिशूलीमा खस्यो
अघिल्लाे - अपडेट: सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको शव फेला